Samsung ayaa soo bandhigi doonta moobayl leh shaashad jilicsan sanadka 2017 | Wararka IPhone
Samsung ayaa bilaabi doonta taleefannada gacanta ee shaashadda jilicsan sannadka 2017
Samsung, oo ah shirkad caalami ah oo soo saarta bandhigyada iyo taleefannada gacanta, ayaa qorshaynaysa inay soo saarto laba nooc oo cusub oo ah casriga ah bilowga sanadka 2017. Mid kasta oo ka mid ah wuxuu ka tirsanaan doonaa noocyo cusub oo taleefanno Samsung ah oo leh shaashad OLED oo si buuxda loo mallayn karo, taas oo ah, shaashad la laaban karo. Sida ku cad macluumaadka ka muuqda Bloomberg, Labadan aaladood ayaa lagu soo bandhigi doonaa rubuca koowaad ee sanadka soo socda, iyadoo laga yaabo in lagu qabto Shirweynaha Caalamiga ah ee Mobile-ka ee magaalada Barcelona bisha Febraayo, waxayna noqon doonaan laba nooc oo mid kasta cabbirkoodu kala duwan yahay isla markaana ka wada tirsan isku nooc, sida iPhone 6s iyo 6s Plus, tusaale ahaan.
Mid ka mid ah moodooyinka ay soo bandhigtay Samsung wuxuu yeelan karaa shaashad 5-inji ah, marka ay ku jirto qaab gacanta lagu duubay, markii la furana wuxuu yeelan karaa shaashad la mid ah kan kiniiniga ah, wuxuuna gaarayaa 8 inji. Qaabka yar ayaa lahaan lahaa shaashad gaari kara ugu badnaan 5 inji oo lagu laalaabi karo xag-xagashada si loogu keydiyo loona raro si fudud jeeb kasta.
Labadan shey waxay beddeli karaan qawaaniinta ciyaarta si ay ugu hiiliyaan Samsung, haddii ay dhab ahaan iftiinka u arkaan muddadaas gaaban oo aysan ka helin tartan suuqa. Ahaanshaha summaddii ugu horreysay ee moobiil leh shaashad la maareyn karo suuqa waxay ku yeelan kartaa cawaaqibyo wanaagsan Samsung, taas oo ka tagi karta Apple iyo iPhone aad uga dambeeya xagga iibka.
Mashruuca waxaa loo yaqaan 'Valle Project' (Dooxada Mashruuca), laakiin ka Samsung ma qorsheynayaan inay u beddelaan wax soo saarkooda calanka, laakiin halkii ay u soo jeedin lahaayeen bilaabitaankooda tijaabo ahaan suuqa, si ay u arkaan aqbalaadda ay ka helayaan dadka isticmaala. Sidaa darteed, moodooyinkan cusub ma raaci doonaan qadka qoyska Galaxy S, laakiin waxay u bilaabi doonaan taxane cusub soo saaraha Kuuriya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Samsung ayaa bilaabi doonta taleefannada gacanta ee shaashadda jilicsan sannadka 2017
Sida sanad walba, munaasabada 13-ka Juun ee WWDC si toos ah ayaa loo baahin doonaa